Dowladda oo ka hadashay xayiraadaha xawaaladaha Soomaalida ee dibadda – Radio Muqdisho
Dowladda oo ka hadashay xayiraadaha xawaaladaha Soomaalida ee dibadda
Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiisyada Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Ra’iisulwasaaraha dalka ayaa walaac looga muujiyay Arrinta la xiriirta ha kinta lacagaha la soo marsiiyo xawaaladaha Soomaalida ee dalalka dibadda Kuwaas oo horay loo joojiyay.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in hadii arrintaan ay sii socoto ay caqabad ku noqon karto dhaqaalaha dowladda iyo dadaalka dowladda ay dib uga soo celinayso Nabad gelyada dalka maadaama lacagaha dibadda dadka Soomaaliyeed ay ka soo diraan ay ku tiirsantahay Dowladda Soomaaliya. sida lagu sheegay warsaxaadafeedkan.
Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya Daa’uud Aweys oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in bankiyadii ugu waaweynaa ee dalka maraykanka ee la shaqayn jiray xawaaladaha Soomaalida ay joojiyeen Adeegyadii ay u flin jireen Soomaalida dirsata lacagaha taas oo saamayn kuyeelan karta dadbadan oo ku tiirsan lacagada dibadda ka yimaada
“si Arrintaan looga hortago Dowladda Soomaaliya waxa ay horay uga shaqaynaysay in la nidaamiyo habka loo maamulo xawaaladaha Soomaalida lacagaha ka yimaada si ay ugu dhacaan gacantii loo baahnaa lacagahaasi Bankiga dhexe ee hadda shaqaynaya waxa uu leeyahay qubaro Arrimahaasi ku xeeldheer oo waliba qeyb gaar ah oo arrimahaasi ka shaqeeya si loo sameeyo wada shaqayn ay yeeshaan Bankiga dhexe iyo kuwa caalamka” ayuu yiri Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya.
dhinaca kale Dowladda Kenya ayaa fariisisay akoonadii bangiyo gaaraya 86 hay’adood oo kuwa maaliyadda ah iyo shaqsiyaad ay uga shakisan yihiin in ay maalgeliyaan argagixisada shabaab.
Arrintaan Kenya waxa ay ku dooneysaa inay ku xanibto lacago ay sheegtay inay gaaraan kooxda Gumaadka Shacabka ee Al-shabaab.,sidoo kale waxaa 86 hayadood lagu daray Arrimaha ay Dowladda isha gaarka ah ku heyso.
Ururka Shabaab ayaa weeraro badan ku qaaday dalka Kenya iyadoo wali wadda hanjabaadyo la xiriira weeraro kale oo Kenya ay ka fulin doonto.
Roobabkii Gu'ga oo ka Curtay Deegaanno ka mid ah gobolada dalka iyo Barakacayaal sheeganaya nolol xumi